10 Amawebhusayithi Aphezulu Khipha ama-Youtube amavidiyo (amahhala) - Ukukhetha okuphephile
Ingabe ufuna ukufunda ukuthi ungalanda kanjani amavidiyo we-youtube? Ungakhathazeki futhi! Kulesi sifundo uzoba uchwepheshe kule ndawo ngamathuluzi alula njengezinhlelo zokusebenza namawebhusayithi, kepha inkulumo eyanele futhi ake sihle ibhizinisi!
I-1 - jdownloader (Isicelo)
Ungalanda kanjani amavidiyo we-youtube
Hlangana ne-jdownloader enamandla! Uhlelo olwenziwe kuJava ne-Open source, etholakalayo kuzo zonke amapulatifomu (amawindi, mac, linux).
I-Jdownloader ingasetshenziswa ukulondoloza isikhathi esiningi uma ufuna ukulanda lonke uhlu lwadlalwayo!
Ngemuva kokufaka uhlelo lokusebenza nokubuyekeza zonke izingxenye, mane nje ukopishe ukuxhuma kwe-youtube kanye nezinkomba zohlelo maduzane ukuze ukhethe ifomethi ezenzakalelayo.
Ungakhetha kusuka kumafomethi okukhipha okuyishumi njengalolu hlu olulandelayo.
-M4a (Kuze kube yi-192 kbps)
-ACC (Kuze kube yi-192 Kbps)
-OGG (Kuze ku-192 kbps)
-MP4 (Kuze kube yi-4k)
-WEBM (Kuze ku-4k)
Uma udinga MP3 ifomethi yomsindo, uzodinga Converter, sincoma Ifomethi Factory (baixaki), okwamanje cishe bonke abafundi umsindo ukwamukela m4a futhi jdownloader ibonisa ukuthi ukuguqulwa mp3 kusukela YouTube ifayela .FLV, elahlekile izinga, ngakho ukhethe m4a ngoba esingabethemba kangcono.
Kula mavidiyo akekho ifomethi ye-.avi, ungakhohlwa ukuthi ifomethi yokuthengisa evela ku-Microsoft.
Ezinye izinzuzo ukusebenzisa ezinye izingosi zokugcina izingosi ezifana ne -vid, i-putlocker kanye ne-mega!
Ngale ndlela ungagcina futhi ama-movie akho nochungechunge njengoba ufuna.
Ngokufingqa: Ithuluzi elihle kakhulu lokulanda amavidiyo nomculo.
I-2 - i-Vdownloader (Isicelo)
Enye yezinhlelo ezithandwa kakhulu umphakathi we-YouTube, isikhombimsebenzisi esibonakalayo esilula, sithwala okunye okunye okuzokwenza ukuphila kwakho kube lula, futhi kune-version premium ebiza i-21 $, ake sikhulume ngezinzuzo zamahhala zalolu hlelo.
- Ukuthutha okuzenzakalelayo kwezixhumanisi kusuka ku-youtube.
-Gcina kumafomethi wevidiyo (1080p, kuze kufike ku-4k) futhi usindise kufomethi yomsindo.
-Iyisiphequluli esakhelwe ukuhamba nge-youtube nakwezinye izingosi zokusakaza.
Inzuzo yale software iyisixhumanisi sayo esilula futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ingenye yezinhlelo ezizithandayo zaseBrazil.
Imisebenzi eminingi iyatholakala kuphela kubasebenzisi be-premium.
Uma unquma ukuba yi-premium, ungalanda wonke ama-paylists ngisho neziteshi ze-youtube! Ungasebenzisa futhi i-plugin yokuguqula amafomethi ahlukahlukene alalelwayo nevidiyo.
Isofthiwe elula ukuyisebenzisa ukuze ufunde ukulanda amavidiyo we-youtube.
I-3 - (Abalandeli kuphela bekhasi lethu le-Facebook)
[i-sociallocker id = "15659"]
Indlela Yokulanda Ividiyo Ye-Youtube - I-Online Media Converter
I-website engcono kakhulu akungabazeki ukulanda amavidiyo we-YouTube, hhayi kuphela amavidiyo we-youtube kodwa futhi asekela amanye amawebhusayithi, ake sibone uhlu:
futhi okuningi okuningi ...!
Sikhetha isixhumanisi esifuna ukulanda futhi sihlanganise ebhokisini futhi singakhetha izinkulungwane zezinketho zamafomethi ahlukahlukene, bheka:
Amafomethi womsindo atholakalayo:
-mp3 (Kuze ku-320kpbs)
-aac (Kuze ku-320kpbs)
-ogg (Kuze ku-320 kbps)
-m4a (Kuze kube yi-320kbps)
-ma (Kuze ku-320Kbps)
Amafomethi evidiyo atholakalayo (Usekela zonke izilinganiso, kuze kufike ku-4k):
Akudingi ukubhalisa futhi isekela zonke iziphequluli zanamuhla, kuyithuluzi elingenamkhawulo lokusebenzisa, ungenza konke okulandwayo oyifunayo futhi ngezinga elikhulu lokudlulisa.
Enye eyengeziwe kakhulu ukufaka isandiso kuziphequluli ezokusiza ukulanda amavidiyo ngqo ku-YouTube ngosizo lwewijethi.
Okokugcina, i-converter yemidiya ye-intanethi nayo isekela ukuguqula amavidiyo kwamanye amafomethi, okwenza abezindaba be-inthanethi baguqulwe isayithi le-3 ku-1.
UKUKHONA: Kukhona amavidiyo amaningi ongahle ukwazi ukulanda ngenxa ye-copyright, uma ngabe ungabafundi ufunde isaziso se-Copyright sewebhusayithi.
Ngamafuphi: Indawo engcono kakhulu yokulanda amavidiyo we-youtube, super fast futhi sicebisa wonke umuntu ukuthi asebenzise lewebhusayithi.
4 - Clip Converter (Iwebhusayithi)
I-converter yesiqeshana yiwebhusayithi enikezela ngamasevisi wokuguqulwa kwevidiyo, ingasetshenziswa futhi ukulanda amavidiyo we-youtube.
Isevisi kulula kakhulu ukuyisebenzisa, uma sikopisha isixhumanisi siyiguqule, uhlelo lokusebenza lusinika ukukhetha kwamafomethi atholakalayo. (Bheka umfanekiso ngezansi).
Amafomethi alandelayo ayatholakala:
Ividiyo (Kuze ku-4k):
Umsindo (bitrate kuze kufike ku-320kpbs):
Ingasetshenziswa namanye amasevisi wokusakaza okufana nalokhu:
Uma singasebenzisi noma yikuphi ukucushwa, kuzokwenza ngcono ukuguqulwa ngamafomethi ajwayelekile.
Uhlelo lokusebenza luyatholakala ngezilimi eziningana, kodwa sithole ukuthi ukuhunyushwa kwesiPutukezi kubuthakathaka.
Isexwayiso: Amavidiyo amaningi omculo noma amavidiyo abhalwe nge-copyright ngeke akwazi ukuguqula.
Ngezansi: Isevisi enhle, kodwa udinga ukuthuthukisa ukuhumusha.
I-5 - KeepVid (Iwebhusayithi, isandiso, nesicelo)
Isevisi enhle ye-intanethi enezici eziningana!
I-Keepvid ihlose ukusabalalisa izinsizakalo zayo kuzo zonke izinhlobo zemvelo, kusukela kusiphequluli kuya ohlelweni lokusebenza (Windows ne-Mac OS).
Yamukela amasevisi angaphezu kwekhulu okusakaza, okukodwa akuyona into ngaphandle kwe-Netflix enkulu!
Kodwa siqala ngewebhusayithi.
Ekhasini eliyisiqalo, sikopisha ukuxhumana kwethu kwe-youtube futhi esiteshini esilandelayo sikhetha izinketho ezihlukahlukene zokulanda.
Amafomethi wevidiyo atholakalayo:
Mayelana nokuxazulula usayizi, kukhululekile kuze kufike ku-720p, kusuka lapho udinga ilayisense ye-Pro version, ukusebenzisa ngokunenzuzo lezi zinqumo.
-MP3 (256kpbs), ye-PRO Version kuphela.
Izinketho zokufometha kwe-audio zibuthakathaka, futhi zonke ziphephezela ukuphoqelela umsebenzisi ukuthi akhokhe ilayisense noma asebenzise uhlelo lwesistimu yokusebenza.
Sihlolwe isandiso (i-Chrome kuphela), njenge-Online Media Converter, sidinga esinye isandiso sokusebenzisa izikripthi, okuyiTamperMonkey Extension.
Emva kokufakwa kokubili, kunoma iyiphi ividiyo ye-youtube, kuzovela ibhokisi elithi "KV | Landa "(Bheka isithombe).
Uma sicindezela inkinobho, sizoqondiswa ekhasini lokuguqulwa ukuze ukhethe ifomethi oyithandayo.
Uhlelo lokusebenza luqukethe isikhombimsebenzisi esibonakalayo esilula futhi sinobuchwepheshe obukhulu, kodwa lapha sasidumala kakhulu, silinganiselwe kumafayela amabili kuphela.
Yebo ... amafayela amabili! Ngemuva kwalokho uzobe uthenge ilayisense ye-pro ebiza amaRandi angu-29 noma usebenzise isayithi ukuguqulwa komunye nomunye.
Kodwa kufanelekile ukuphawula, ukuthi uhlelo lunemisebenzi emihle efana nokurekhoda isikrini sakho nokuguqula amavidiyo.
Ngamafuphi: Iwebhusayithi enhle nesandiso, kodwa uhlelo lokusebenza lufunwa, uma befuna ngempela ukusebenzisa uhlelo ngaphandle kwemingcele, iya ku-jdownloader noma i-vDownloader.
6 - y2mate (iwebhusayithi)
I-y2mnyama ilula kakhulu ukuyisebenzisa, njengabo bonke abanye, izinqubo zifana, sophinde sixhumanise futhi siqhubekele esiteji esilandelayo, amavidiyo amaningi avinjelwe kumguquli we-inthanethi we-media kanye ne-convert converter, ngokumangalisayo asebenza lapha.
Asazi ukuthi bekuyizinhlanhla nje, kodwa njengamanye amasayithi sinekhasi elikhuluma nge-copyright.
Ukukhuluma ngamafomethi, lawa yiwo atholakalayo:
-Mp4 (Kuze ku-1080p)
Umsindo (bitrate kuze kufike ku-128kbps):
Isekela izinsizakalo zokusakaza ezilandelayo:
Akukho ukubhaliswa okudingekayo futhi okulandwayo kuyashesha kakhulu.
Enye inqubo engase ikuthande, ukushintsha isixhumanisi se-youtube sokuguqulwa okusheshayo.
Y2mate (engeza pp ngemuva youtube):
Ngesikhathi sokuqala ungathola iphutha lesitifiketi se-SSL, nje ungayinaki okokuqala.
Sithanda ukuhunyushwa kwisiPutukezi, kuhunyushwa kahle, isayithi likhona kusukela ku-2016, ngethemba lokuthi lizoqhubeka nokunye okuningi!
Ngamafuphi: Okunye okunye okuhle ku-intanethi, okulula ukuyisebenzisa.
I-7 - Umculi we-Muvi (Isicelo se-Android)
Usuvele ubona isisombululo se-inthanethi se-Inthanethi kanye nezicelo zedeskithophu, kodwa akatholanga lutho Android?
I-playstore ye-Google ivimbela izinhlelo zokusebenza ezilanda amavidiyo kusuka ku-Youtube.
Ngakho awusoze uthole noma yiluphi uhlelo lokusebenza ukulanda amavidiyo we-youtube.
Umculi we-Muvi akatholakali esitolo sokudlala, udinga ukuya kwi-website esemthethweni bese ulanda i-APK ye-Android.
Emva kwalokho kuzodingeka ushintshe izilungiselelo zokuphepha ukuze ufake izinhlelo zokusebenza ngaphandle kwe-playstore.
Ukubuyela ku-Umvi Downloader ...
Usekela izandiso ezilandelayo:
Ividiyo (Kuze ku-1080p):
Umsindo (kufika ku-256kpbs):
Singenza ukulandwa / ukuguqulwa okuningi ngesikhathi esisodwa bese ulondoloza kwiKhadi Lememori le-SD noma imemori yangaphakathi (i-smartphone, ithebhulethi).
Ngamafuphi: Sikholelwa ukuthi uhlelo lokusebenza olungcono kakhulu ukulanda amavidiyo ku-youtube kusuka ku-Android.
I-8 - YooDownload (Iwebhusayithi)
Enye isevisi yamahhala ye-intanethi yekhwalithi enhle kakhulu, isanda kufushane, iphinde isetshenziselwe isiphequluli se-Google Chrome, nje ukopishe isixhumanisi kusuka ku-youtube bese unamathisela ebhokisini lekhasi lasekhaya (idinga i-captcha).
Usekela amanye amasayithi okusakaza afana nalokhu:
Amafomethi wevidiyo asekelwe (Kuze ku-720p):
Ezingeni likaMsindo sinefomethi ye-MP3 kuphela.
amanothi ezibalulekile: Indawo ine komkhawulo yevidiyo (kufika ku 10 imiz) kanye alalelwayo (kufika 7min), uma ufuna ukusebenzisa le nsiza izingoma ezinde noma amavidiyo ngakho obuphelele okukhulu akuyona service eziphakanyisiwe.
Izindaba ezinhle ukuthi akudingi ukubhalisa futhi ngokushesha, okuthembekile, ungalanda amavidiyo we-twitter / facebook / instagram kule nsizakalo.
Ngamafuphi: Kufanelekile ukuba nomkhawulo wesikhathi emavidiyo nakwezomsindo, ukuphumula kuthatha inothi elihle.
9 - GenYoutube (Iwebhusayithi)
Ama-genyoutube afana nokuxhumana nabantu abalayisha amavidiyo, okwenza kube mnandi futhi uwahlukanise nabanye.
Uma silayisha ikhasi lokuqala, sibona izibalo ezithakazelisayo ezifana ne-TOP 10 Izingoma eziningi ezilandiwe, kuze kube yilapho singabona ngezigaba zomculo ezahlukene.
Singakwazi ukufinyelela ikhasi "Trendings" elisho "Amathrendi" bese ukhetha izwe laseBrazil, ukwazi ukuthi yimaphi amavidiyo aphezulu, insiza ethakazelisayo kakhulu futhi ewusizo kunoma ubani ongacaciswanga ukuthi iyiphi ividiyo yokulanda.
Amafomethi wevidiyo asekelwe (Kuze ku-1080p):
Amafomethi womsindo (Kuze ku-128kpbs):
I-Genyoutube inikeza isethi yamasevisi aqondiswe kumanethiwekhi omphakathi futhi singasho ukuthi siyathanda kakhulu ngokuhluka kancane kwezinye izinsizakalo ze-intanethi.
Ngamafuphi: Isevisi enhle ku-intanethi enebhonasi yokuthola umkhuba wabasebenzisi be-youtube.
10 - guqula2mp3
Isebenza kahle kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa, le website ihlose ukuguqula amavidiyo kuya kufomethi ye-MP3, kodwa kungenzeka futhi ukulanda amavidiyo.
Inezinye izici ezithakazelisayo, ezifana nokucinga ngokuqondile izihloko ngqo kwiwebhusayithi, ukushintsha amathegi we-ID3 (ngamagama ahlukanisa ingoma) futhi wanezela isithombe kwisfayela le-mp3 usebenzisa isithonjana sevidiyo.
Isekela amafomethi wevidiyo (Kuze ku-1080p):
Amafomethi Womsindo (128kbps):
Izinkinga zale nsizakalo ukuthi ayikho ukuhumusha ngesiPutukezi, futhi izinga le-bitrat kumafayela alalelwayo alidluli i-128 kpbs.
Ngamafuphi: Kulabo abafuna ukulanda umculo nge-ID3 nesithombe, le nsizakalo ingaba nekhono eliphezulu. Iziphatha kahle ngokulanda amavidiyo kusuka ku-youtube.
Kunezinsizakalo ezingaphezu kwekhulu, isofthiwe nezandiso zokulanda amavidiyo kusuka ku-youtube, facebook, instagram, njll.
Sikholelwa ukuthi ngalawa mathuluzi ozofakwa ohlwini uzofunda kalula ukulanda amavidiyo we-youtube.
Uyazi ngamanye amasayithi namasevisi? Beka amazwana lapho futhi usize umphakathi!
I-123456 ibuye ibe yiphasiwedi esetshenziswa kakhulu
 Imisindo yefoni yamahhala (+ umsindo we-100.000)
I-Smartphone Review Homtom S9 Plus
I-OnePlus 6 ingahle ibe nephutha ekukhiqizeni
 Izindawo ze-Best Les Streaming ze-7 (mahhala)
Indlela Yokugwema Amasiko Nge-GearBest